वाम गठबन्धनले पहिचानको मुद्धा थप सशक्त हुन्छः मातृका यादव | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अशोज २२ गते, २०७४ - २०:५९
खबर डबली, संवाद डबली
माओवादी केन्द्र र एमालेसहित नयाँ शक्तिको चुनावी तालमेलसंगै पार्टी एकीकरणको प्रयासलाई लिएर अनेक टिप्पणी भैरहेका छन् । विगतमा मधेस केन्द्रित दलहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने सवालमा विपक्षमा उभिर फेल गराएको एमालेसंगको एकतापछि अब पहिचानको मुद्धा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यहि सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं प्रदेश नम्बर दुईका इञ्चार्ज तथा पार्टीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चाका संयोजक मातृका यादवसँग रघुनाथ बजगाईँले लिएको अन्तवार्ता–
वाम एकताले पहिचानको मुद्धा कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ?
स्वभाविक रुपले नयाँ परिवेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आशंका गर्नु स्वभाविक हुनसक्छ । एमलेभित्र पनि पहिचान पक्षधर छन् । विगतमा के भयो भन्दा पनि अव कसरी जाने भन्ने दुबै पार्टीको सहमति अनुसार हामी एकीरणसम्मको प्रक्रियामा छौँ । पहिचानको मुद्धा अगाडि बढाउनेमा प्रश्न भन्नुभयो, प्रश्न होईन अब झन नयाँ शिराबाट सशक्त रुपमा उठाउन सजिलो भएको छ । विगतमा पहिचानको मुद्धाका बिषयमा एमालेका धेरै साथीहरु पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट थिए । मधेसी र पहिचान पक्षधर त्यस्ता साथीहरुबाट हाम्रो मुद्धा स्थापित गराउन मद्धत पुर्याउँदछ ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि भन्दै संसदमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव फेल गराएको एमालेले तपाईले भने जसरी काम गर्लान त ?
हैन,आन्तरिक संर्घष हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पार्टीमा रहेर त पहिचान पक्षधरहरु एक थियौ भने अब झनै सजिलो भएन र रु त्यतिबेला एमालेका धेरै साथीहरुले पार्टीको ह्वीप मानेर आफुलाई लज्जित गराएका हुन् । त्यस्ता इमानदार नेताहरु अब खुल्न झन सजिलो भयो नी, यो बिषयलाई थप उचाईमा पुर्याउँन कसरी जाने भन्नेमा छलफल भने हुन्छ ।
पछिल्लो समय ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्बली’ गठन गर्नुभएको थियो नी १ के गर्दैछ अहिले ?
सम्बन्धित् समाचार जिसस बर्दियामा माओवादी गठबन्धन विजयी
म फेरी दोहोर्याउन चाहन्छु वाम गठबन्धनले पहिचानको मुद्धा थप सशक्त हुन्छ । नयाँ शिराबाट अगाडि बढेर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाईन्छ ।
भनेपछि वाम गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्छ ?
पहिचानको मुद्धा स्खलीत हुने भो भन्दै गोपाल किँरातीले माओवादी पुर्नगठन गर्ने भनेका छन् नी ?
उहाँलाई म आग्रह गर्छु पहिचान सबैको मुद्धा हो । गठबन्धनभित्रैबाट लडौँ । अन्यथा सहि गन्तव्य समात्न गाह्रो हुने विगतका अनुभवले पनि देखाएका छन् ।
अशोज २२ गते, २०७४ - २०:५९ मा प्रकाशित
सीमा समस्या टुंग्याउन सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत जान तयार हुनुपर्छ : परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ
जनआन्दोलनका कमान्डर सिंहको सालिकमा माल्यार्पण
नागरिकता हेरर मात्र विवाह गराउनेमा पण्डित सहमत
बेहोस भएर मलेसियामा एक नेपालीको मृत्यु
भारतको नक्शामा नेपाली भूभाग परेपछि राप्रपाको आपत्ति
सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा ६ जना लडाकुको मृत्यु
लाेकसेवा सहयाेगी : १०० अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनकाे उत्तर
विश्व शान्तिसम्बन्धी नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबारदेखि काठमाडौँ